एउटा यस्तो भिडियो जुन टिकटकमा राखेको ६ दिन मै ५ करोडले हेरे, नेपाल मै रहेको यो ठाउँ को यस्तो छ भित्रि रहस्य (भिडियो) - Kohalpur Trends
ललितपुर । अहिले यो टिकटक, फेस्बुक र युटयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन । आज हामी त्यस्तै रिपोर्ट लिएर आएका छौ, जुन टिकटकको १० सेकेन्डको भिडियोलाई ६ दिनमा नेपाली दर्शक तर प्राय बिदेशी दर्शकहरुले गरेर ५ करोडले हेरेर कमेन्ट गरे कुन ठाउ हो ?
र यो कहा छ ? भनेर बिदेशीहरुका कमेन्ट यति धेरै आएकी जहा कमेन्ट गरेकै पोस्टमा ८०—९० हजार लाइक पनि पुग्यो ।आकृति केसी युजर नाम भएको आइडीमा यति धेरै लाइक र कमेन्ट आएकी मानौ टिकटकका सबै रेकर्ड तोडियो । ८८ हजार कमेन्ट ७० हजार सेयर र करिब ४२ लाख लब रियाक्ट छन यो पोस्टमा, तपाईले अझै पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
यसबारे बुझदै जादा हामीले ठाउ“ पता लगायौ जुन ठाउ रहेको रहेछ ललितपुरको धोबीघाटको मलपोखरी भनेर चिनिने रहेछ । पहिला यस ठाउमा ठूलै पोखरी रहेको स्थानियबासीहरुले जानकारी दिएका छन र बिस्तारै यसमा ढल आएपछि यसरी घासमाथिनै हिडन मिल्ने र घास हल्लिएर जमिन पनि हल्लिने जानकारी दिएका छन, हेरौ यो अचम्मको ठाउ र स्थानियले के भन्छन ?
Previous Previous post: पार्टी संकटमा छैन,आफैलाई कमजोर गर्ने काम नगरौं : देउवा
Next Next post: माछा मार्ने क्रममा पोखरीमा डुबेर एकजनाको मृत्यु